Palestina : Natomboky ny Google ny “google.ps” ho an’i Palestina · Global Voices teny Malagasy
Google.ps dia azo idirana amin'ny fiteny anglisy sy arabo
Voadika ny 15 Desambra 2020 2:08 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Swahili, বাংলা, Français, English
“Nandritra ny taona maro, nampidirin'ny Google ny dika amin'ny fiteny eny an-toerana [amin'ilay milina fikarohany] toy ny google.co.uk (Fanjakana Mitambatra), google.jo (Jordania), izay ahafahana mahazo vokatra avy amin'ny fikarohana mifantoka amin'ny toerana kendrena” hoy ilay bilaogera ArabCrunch, tamin'ny nanambaràna ny fanapahankevitry ny Google hampiditra ny anaran-tsehatra google.ps (ps=Palestina) ho ao anatin'ny lisitra. Ao Cisjordania sy Gazà io dika vaovao amin'ny Google io no tokony hiasa, toerana izay Palestiniàna no tompony sy miantoka ny fahafahana miditra aterineto.
Tamin'ny herinandro lasa, nambaran‘ny bilaogin'ny Google “Google Arabia” io fanombohana io sy ny antony nanovana izany :
Androany dia nampiditra anaran-tsehatra iray vaovao fanampiny izahay ho ao anatin'ny lisitray, ny “google.ps”. Io anaran-tsehatra vaovao io dia hahafahan'ireo mpampiasa amin'ny fiteny arabo manerana ny faritra Palestiniàna, izay miditra aterineto amin'ny alàlan'ireo mpanome tolotra aterineto palestiniàna, miditra aoamin'ny Google amin'ny fiteny arabo sy, atsy ho atsy, mahazo ireo votoaty sy vokatra fikarohana mifantoka amin'ny toerana misy azy, ary mifanaraka kokoa. Miaraka amin'ny fandefasana ny “google.ps”, nihoarantsika ny isa 160 amin'ny anaran-tsehatra Google manerana izao tontolo izao.
Tao anaty tenimita iray nalefa ho an'ny ArabCrunch, hazavain'ny Google ny fomba fidonan'izany any amin'ireo mpampiasa ny AdWords, ilay tolotra fanaovana dokambarotra ety an-tambajotra :
Miaraka amin'ny AdWords, azonareo atao ny mikendry ny dokambarotrareo hifanaraka amin'ny firenena na faritany, na faritra sy tanàna voafaritra manokana. Mampiasa masontsivana marobe ny rafitra Adwords mba hoentina mamaritra hoe ho aranty sa tsia ilay dokambarotra nataonareo, araka ny anaran-tsehatra Google nampiasaina (.mg, .fr, .de, Kr, etc.), ary araka ny fikarohana ataon'ilay mampiasa aterineto sy, rehefa afaka atao, faritanay amin'ny alàlan'ny adiresy IP-n'ny solosaina ampiasainy ny toerana misy ilay mpampiasa.”
Manazava ny bilaogy Window into Palestine fa tsy tonga dia hahazo miditra amin'ilay google.ps akory ireo Palestiniàna mipetraka ao Jerosalema-Atsinanana (fanamarihana: mila mametaka fotsiny ny adiresy google.ps mba hidirana aminy raha izay no mitranga):
Ankoatra an'i Jerosalema-Atsinanana, izay eo ambany fitantanan'ny Israeliàna, ny sasany amin'ireo Palestiniàna ao Cisjordanie sy Gaza dia nampiasa tamin'ny ankapobeny ny www.google.jo, anaran-tsehatra ho an'i Jordania, ary ilay natao ho an'i Ejipta, www.google.com.eg, indray ho an'ny hafa.
migueldeicaza mpampiasa Twitter maneho ny fientanentanany noho ilay vokatra vaovao ao anatin'ny fianakaviambe Google :
Tsy manampaharoa! Efa ananan'ny Google izao ny Google ho an'i Palestina : wwww.google.PS (via @rlove)
daiski, iray hafa mpampiasa Twitter miaina any Katara, misaotra ny Google noho io hetsika io :
Isaorana ny @google mankato ny fisian'i #Palestina
Google.ps dia azo idirana amin'ny fiteny anglisy sy arabo.
28 Marsa 2019Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana